ဆယ်လူလာ ဆက်သွယ်ရေး (Cellular Concept) – Oakkar7's Blog
On May 1, 2010 March 19, 2013 By oakkar7In GSM (ဂျီအက်စ်အမ်)
GSM, CDMA စတဲ့နည်းပညာတွေဟာ့ ဆယ်လူလာ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာကို အခြေခံကြပါတယ်၊ မြန်မာပြည်မှာ ဆယ်လူလာလို့ အလွယ်ခေါ်နေကြတဲ့ ဖုံးတွေဟာ တကယ်တော့ D-AMPS ဖုံးတွေပါ၊ ဆယ်လူလာဆိုတာ အဓိကကတော့ တနေရာနဲ့တနေရာ သွားလေရာ ယူဆောင်သွားပြီး ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစံနစ်ကို ခြုံငုံပြီးခေါ်တဲ့ Technology term ပါ၊ ခေတ်ဦးက မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစံနစ်တွေမှာ လက်ကိုင်ဖုံးကနေ Base station ကို ချိတ်ဆက်ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်တာခြင်းတော့ တူကြပါတယ်၊ အဓိကအခက်အခဲက Base Station ရဲ့ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာ (Coverage Area) အပြင်ကိုရောက်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားဆားဗစ်ပေးသူရဲ့ ဧရိယာထဲကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရောက်သွားခဲ့ရင် ဆက်သွယ်မှု မရနိုင်တော့တာပါပဲ၊ ဒီပြသာနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ Bell Research ကနေ “Bell System Technical Journal” မှာ Cellular ရဲ့ ပထမဆုံး concept ဖြစ်တဲ့ AMPS (Advanced Mobile Phone System) ကို စတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
Cellular Phone ဆိုတာကတော့ ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာ (Cell) တွေကို Base Station တစ်ခုစီကနေ ပိုင်းခြားထားပြီးဆက်သွယ်တဲ့ စံနစ်ပါ၊ ဒီ cells တွေအားလုံးကိုလဲ တစ်ခု ထက်ပိုတဲ့ ထိမ်းချူပ်ရေးဌာန (Control Center) တွေစီကနေ လိုအပ်သလို ထိမ်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်၊ အားသာချက်ကတော့ သုံးစွဲသူဟာ cell area တစ်ခုကနေတစ်ခုကို ဆက်သွယ်မှု မပြတ်စေပဲ ပြောင်းလဲဆက်သွယ်နိုင်လာပါတယ်၊ သုံးစွဲသူဟာ ဘယ် Base Station နဲ့ သူချိတ်ဆက်နေသလဲဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်သိစရာမလိုတော့ပဲ အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲချိတ်ဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ဒီ cells တွေဟာ base station ကနေ 60 degree ကို ဧရိယာခွဲပြီး ခြောက်ထောင့်ပုံ (Hexagonal) ရှိပါတယ်၊ ရံဖန်ရံခါ ၃ ပိုင်းသာပိုင်းပြီး 3-Cells (120 degree) လဲ လိုအပ်ရင် ထားတပ်ပါတယ်၊ ဒီလိုခွဲလိုက်တဲ့အခါ ဆက်သွယ်ရေး ဧရိယာတစ်ခုလုံးဟာ ခြောက်ထောင့်ကွက်တွေဆက်ထားတဲ့ ပျားအုံပုံ ဖြစ်လာပါတယ်၊ ဆက်သွယ်မှုပြုတဲ့နည်းလမ်း (Access Technology), သုံးစွဲသူကိုထိမ်းချုပ်တဲ့နည်းလမ်း (User Management/Control), ဆဲလ်တစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုကိုကူးပြောင်းမှု (Hand-Off Technology) စတာတွေ ကွာခြားလို့သာ CDMA, GSM စသည်ဖြင့် နည်းပညာတွေကွာခြားသွားပါတယ်၊ DAMPS, CDMA, GSM, ဘယ်မိုဘိုင်းဆကိသွယ်ရေးစနစ်မဆို ဒီ cell ဒီဇိုင်း ဒီပုံစံကိုပဲ ယနေ့တိုင် စံပြုသုံးစွဲနေကြဆဲပါပဲ။
ဥပမာ သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ဟာ Cell-A ကနေ Cell-B ကို သွားနေရင်း ဆက်သွယ်မှုပြုလာရင် အစမှာတော့ သူနဲ့အနီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ Cell-A နဲ့ချိတ်ဆက်နေမှာပါ၊ သွားရင်း cell နှစ်ခုရဲ့ အစပ်ကိုရောက်လာရင် ထိမ်းချူပ်ရေးစခန်းကနေ သုံးစွဲသူရဲ့ ဟင်းဆက်ကနေ base Station တွေရဲ့ရေဒီယိုဆက်သွယ်မှု အခြေအနေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါတယ်၊ အဓိကကတော့ ချိတ်ဆက်နေတဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်းရဲ့ ဆက်သွယ်မှုပါဝါ (Receiving Power Level) ကိုကြည့်ပါတယ်၊ တကယ်လို့ Station-B ကနေ သုံးစွဲသူကို ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေဟာ Station-A ထက် ကောင်းနေတယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဟာ Station-B ဆီကို ဆက်သွယ်မှု မပြတ်တောက်စေပဲ ပြောင်းလဲချိတ်ဆက်သွားပါတယ်၊ ဒီလို ပြောင်းလဲချိတ်ဆက်တာကို “Cell Switching” လို့ခေါ်ပြီး Station-A နဲ့ သုံးစွဲသူ ဆက်သွယ်မှုကို Station-B ကနေလွှဲပြောင်းယူတာကို “Hand-Off” လုပ်တယ်လို့ သုံးနှုံးပါတယ်။
Cellular Technology Concept
နောက်တစ်ခုကတော့ GSM သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ဟာ ဆားဗစ်ဧရိယာ တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို ကူးပြောင်းသုံးစွဲနိုင်တာ (Roaming) ပါပဲ၊ မြန်မာပြည်မှာ Service Provider က MPT တစ်ခုသာရှိလို့ ဒီကိစ္စဟာ မသိသာလှပေမယ့် Service Provider တစ်ဦးထက်သာ ပိုခဲ့ရင် အရေးကြီးလာပါပြီ၊ ဥပမာ GSM သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ဟာ Service Provider-A ကနေသုံးစွဲမှုကိုယူထားတယ် ဆိုပါစို့၊ သူက သွားရင်းလာရင်းနဲ့ Service Provider-B ရဲ့နက်ဝပ်ထဲကို ရောက်သွားတယ် ဆိုကြပါစို့၊ Service Provider-A နဲ့ Service Provider-B တို့ဟာ အရင်ထဲက သဘာတူညီမှု ရှိထားရင် သုံးစွဲသူဟာ Service Provider-B ရဲ့ နက်ဝပ်ဧရိယာထဲမှာ ဆက်လက်သုံးစွဲ နိုင်ပါတယ်၊ GSM မှာ ဒီ Roaming ဆားဗစ်ဟာ တော်တော်အရေးပါသလို GSM ကို World Wide လူသုံးအများဆုံးဖြစ်အောင် အောင်မြင်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းလဲ ဖြစ်လာပါတယ်။
Roaming from One Service Area to Another
3 thoughts on “ဆယ်လူလာ ဆက်သွယ်ရေး (Cellular Concept)”
ကျေးဇူးပါ ကျွန်တော်တို့ဖို့ရမ်လေးမှာလဲအဆင်ပြေရင်ဝင်ရေးပေးပါအကို EC သမားတွေမှာ communication အရမ်းအားနည်းနေလို့ပါ
Dear Ko winmyohein,
Thanks for visiting. Roughly, you can share the contents by referring the original source (my blog). I will try to participate your forums also. At the moment, I cannot even update by blog because of my job’s loading.
October 20, 2010 at 4:05 am	 Reply
EC ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှာ communication အားနည်းနေလို့များများလေးရေးတင်ပေးပါအကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
April 22, 2013 at 3:00 am	 Reply